Mase laga phone cusub had iyo jeer waa arrin xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u bedesheen telefoonka smart la OS kale ama xitaa nooc oo kala duwan oo ah OS la mid ah, aad rabto in laga yaabo in uu ogaado sida aad si fudud u wareejin karaan dhammaan macluumaadka. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay lumiyaan xogta ka telefoonka, gaar ahaan, xiriirada aad, fariimaha, files warbaahinta, jadwalka, iyo barnaamijyadooda.
1. xogta Transfer isticmaalaya Bedelka My Data app
2. xogta Transfer la adeegsanayo dhisay-in Windows qoreysa
1. xogta Transfer isticmaalaya Mobiletrans Wondershare in mid ka mid click
Waxaad isticmaali kartaa software sida Bedelka My Data. Waa software free si ay u isticmaalaan, oo waxaa loogu talagalay si ay u taageeraan kala iibsiga u dhaxeeya phone laba daaqadaha. Waxaad kaloo isticmaali kartaa muuqaalada ee loo dhisay ee telefoonka Windows si aad u hesho dhammaan macluumaadka aad u muhiim ah ee aad taleefan. Labada hababka waa bilaash oo wax ku ool ah xogta ku wareejin karaa telefoonka daaqadaha jir ah u phone cusub daaqadaha.
Talaabooyinka in xogta laga daaqadaha jir wareejiyo phone in phone daaqadaha cusub oo isticmaalaya Bedelka My Data app
Waxaad ku rakiban kartaa Bedelka aan app Xogta laga dukaanka. Waa in aad u soo dajiyo labada telefoonada sida tan xogta app nuqul ka phone jir ah u phone cusub via Bluetooth.
Habkani waa faa'iido cayn kasta oo xogta. Ha noqoto xiriirada, sawiro, videos, music, iwm, waxa si fudud loo samayn karaa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laguu gacanta wareejinta doonaa xogta laga midkoodba ka kale ka drives kaydinta.
1. Bedelka aan app Data
2. Bluetooth isku xirnaanta labada telefoonada
Hubi in 1. telefoonka jir sameeyo, Bluetooth ah oo ay tahay inay ogaadaan.
2. Hadda abuurtaan app ku saabsan Windows phone cusub. On screen guriga, kaliya ka jaftaa ku sii.
3. Waxaa iskaan doonaa phone hore aad rabto in aad si xubnuhu leh. Marka phone hore la ogaado, tuubada waa ku in ay ku xidhmaan.
4. Hadda waxa laga baarayo doonaa nooca xogta phone hore u ogolaanaya in ay u gudbiyaan. Marka la marsiiyey, hubiyo in saxday. Waxa kale oo ay ku tusi doonaa qadarka wakhti ayay qaadan doontaa in la sameeyo kala iibsiga. Nooca xogta loo gudbin karaa waxay ku xiran tahay phone jir. Qaar ka mid ah telefoonada ogolaan kaliya xiriirada, iyo qaar ka mid ah sidoo kale u ogolaataa fariimaha qoraalka ah iyo sawiro in lagu wareejiyo. Hadda, ka jaftaa kaliya ku bilowday si ay u kala iibsiga.
5. Next screen ku tusi doonaa xaaladda kala iibsiga oo sug ku dhammeeyo kala iibsiga.
Warbixin hadda wareejiyo telefoonka, kaliya ka fiiri barnaamijyadooda kala si ay u xaqiijin.
Habkani waa u fududahay sida aad u baahan tahay oo kaliya app ku saabsan telefoonka cusub.
Si dhakhso ah synchronizes xogta si aad telefoon cusub. Ma jirto dadaal badan ku lug leh ku.
Ma jirto baahi ah ee internet sida loo isticmaalo si isku xirnaanta Bluetooth.
Waxa kaliya ee u ogolaanaya nooca kooban oo wareejinta xogta sida xiriirada, fariimaha qoraalka ah, iyo sawirka. Xaaladaha qaarkood waa kaliya xiriir.
Xirnaanta Bluetooth qaadan kartaa waqti si ay u gudbiyaan haddii xogta waa weyn yahay.
Talaabooyinka in xogta laga daaqadaha jir wareejiyo phone in phone daaqadaha cusub oo isticmaalaya dhisay-in muuqaalada Windows
Marka aad soo iibsato telefoonka cusub iyo marka ugu horaysa aad waxaa u qotomiyey telefoonka. Marka aad iska badasho ah ee aad taleefan markii ugu horeysay, la, waqtiga, taariikhda macluumaadka, login iyo qaar badan oo gasha doonaa. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka in aad qabto doorasho ah in la soo celiyo ka phone jir.
U baahan xirnaanta Wi-Fi
Old aqoonsiga login telefoonka ee xisaabaadka kala duwan.
1. biiro hore ee aad taleefan aad mari doontaa hawl socdaalka oo ay ka mid xiriir Wi-Fi, zone markii iwm kaliya galaan si faahfaahsan u kasta ah. Marka aad gaadho talaabada meesha lagu weydiiyo in aad geli account Aqoonsiga Microsoft ah, gali mid ka mid ah in aad loo isticmaalo ee aad taleefan jir.
2. tallaabo Tani waa tallaabo muhiim ah. Marka aad saxiixay. Waxaad heli doontaa liiska ugu dambeeyey gurmad phone daaqadaha files ka phone jir. Dooro mid ama ku haboon ee mid ugu dambeeyey oo soo socda ka jaftaa.
3. Next screen weydiin doonaa xaqiijinta habka soo celiyo. Ama habkan xidhi doona iyada oo Wi-Fi ah ama qorshaha xogta. Just xaqiijiyo hanaanka by siyoodba ku soo socda.
4. screen Tani waxay muujiyaan bar horumarka habka ugu. U ogolow in ay buuxiso.
5. Inta lagu guda jiro habka tan aad leedahay doona inay lasoo saxiixato qaar ka mid ah xisaab ah sida Facebook, twitter iyo kuwa kale. Just isticmaali shahaadada aqoonsiga aad u isticmaali ah ee aad taleefan jir.
6. Marka adag hab-socodka waa dhameystiran yahay, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si loo soo celiyo telefoonka jir. Tag dukaanka oo ay u sameeyaan menu xulan Downloads ah. Tani waxay muujinaysaa barnaamijyadooda aad soo bixi saabsan telefoonka jir. App oo dhan uu ku rakiban telefoonka.
7. Next screen ku tusi doonaa shaashadda download muujinaya horumarka barnaamijyadooda u soo bixi aad telefoonka.
Habkani falaa u hesho wax badan oo xog ku saabsan in aad telefoonka, markii aad ku biiro hore ee aad taleefan cusub daaqadaha. Waxa aan looga baahnayn wax app ama pc kala iibsiga, aad u baahan tahay oo dhan waa isku xirnaanta Wi-Fi.
Waxay u baahan tahay Wi-Fi soo bixi xog ku saabsan in aad telefoon.
Apps ama Guda wac uma wareegi karo; ay ku rakiban cusub ee aad taleefan cusub.
Waxaad aad u soo celin telefoon si phone jiray markii aad iska badasho aad telefoon cusub oo markii ugu horeysay.
Ma u baahan tahay wax-socodka software xisbiga ama kala iibsiga pc saddexaad. Xirnaanta net oo kaliya ayaa loo baahan yahay.
Wax walba synced u barta telefoonka jirkaan oo dhan xogta la mid ah.
Talaabooyinka in xogta laga daaqadaha jir wareejiyo phone in phone daaqadaha cusub oo isticmaalaya Mobiletrans Wondershare
Talaabada 1: Wondershare Mobiletrans on your computer Open iyo xirmaan labada telefoonada Windows in kombiyuutarka. Mobiletrans recogize doonaa labada qalabka dhowr ilbiriqsi.
Talaabada 2: Wondershare Mobiletrans taageeri karaan inay si toos ah u gudbiyaan Photos, Videos, Music files u dhexeeya laba telefoonada daaqadaha. Dooro noocyada file aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan oo guji Start Transfer ka. Faylasha ayaa loo wareejin doonaa phone bartilmaameedka in dhowr daqiiqo. Fadlan ha barkinta labada qalabka inta ay socoto.
PS. Haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan xiriirada, fadlan dib ilaa xiriirada ee OneDrive ku saabsan telefoonka. Riix Soo Celinta ka hayaan on Mobiletrans in la soo celiyo xiriir si aad u phone bartilmaameedka.
Way fududahay in xogta ka Windows OS jir wareejiyo mid cusub. Iyadoo Windows ayaa soo waddo dheer tan iyo Windows ee telefoonada smart oo markii ugu horraysay soo bandhigay, weli waxaa jira awoodaha nidaamka wanaagsan ee u dhexeeya laba iyo ma aha in aad walwasho.
Labada hababka leeyihiin wanaagsan iyo diidmo gaar ah ay, isticmaal mid ka mid ah kaas oo ku habboon oo aad looga baahan yahay kuwa ugu fiican.
> Resource > Windows > Sida loo soo biiray Old Windows Phone in New Windows Phone